(Nature) ၂လုံး ၃လုံး ပပျောက်ရေး အကြံပေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » (Nature) ၂လုံး ၃လုံး ပပျောက်ရေး အကြံပေး
(Nature) ၂လုံး ၃လုံး ပပျောက်ရေး အကြံပေး
Posted by nature on Jun 19, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
(Nature) ၂လုံး ၃လုံး
နိုင်ငံတော်က ၂လုံး ၃လုံး ပပျောက်ရေး အတွက် ဒိုင်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖမ်းနေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ကျနော့်အတွေးကတော့ ဒါတွေကို ဖမ်းရုံနဲ့ အမြစ်ပြတ် ပပျောက်နိုင်ပါသလား။ မလွယ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အခြေခံကျတဲ့ အဓိကအချက်ကို ဖြေရှင်းတယ်လို့ မထင်ပါ။ သစ်ပင်တပင်ကို အမြစ်ပြတ် သတ်ချင်ရင် မြင်ရတဲ့ အကိုင်းအခက်တွေကို ပင်စည်တွေကို ခုတ်ပစ်ရုံနဲ့ ဒီသစ်ပင်ဟာ သေသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ လောလောဆယ် အမြင် ရှင်းပြီး သေသလို ဖြစ်နေပေမဲ့ ရေသောက်မြစ်ရှင်သန်နေတဲ့ အတွက် မကြာမှီမှာ ပြန်လည် ရှင်သန်လာပါလိမ့်မယ်။
၂လုံး ၃လုံး ရဲ့ရေသောက်မြစ်ကရော ဘာလဲ။ ထိုးသားတွေရဲ့ ဆင်းရဲတွင်း လွယ်လွယ် လွတ်မြောက်စေနိုင် တယ်ဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ ထိုးလိုတဲ့စိတ် ၊ အကျိုးအမြတ်ရှိလို့ ရောင်းချင်တဲ့ ဒိုင်တွေရဲ့ ဆန္ဒ လို့ထင်ပါတယ်။ ထိုးတဲ့သူကလည်း ထိုးချင်တယ် ၊ဒိုင်ကိုင်တဲ့သူကလည်း ကိုင်ချင်တယ်၊၊ သူတို့ ၂ဦး ရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို တတိယ လူတယောက်က လုံးဝ ပပျောက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒိုင်တွေကို ဖမ်းတာကတော့ သစ်ကိုင်းတွေကို ခုတ်ပစ်တာနဲ့ တူတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ခဏပဲ ညိမ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ဦးရဲ့ ရင်ထဲကဆန္ဒ ဆိုတဲ့ ရေသောက်မြစ်ကတော့ ဆက်လက် ရှင်သန်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
သူတို့ ၂ဦးရဲ့ ဆန္ဒဆိုတဲ့ ရေသောက်မြစ်လည်း အဆင်ပြေသွားအောင် နိုင်ငံတော်လည်း အကျိုးရှိအောင် ကျနော့်အမြင်ကိုအကြံပြု တင်ပြလိုပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့အမြင်ကို တင်ပြခြင်းသာဖြစ်လို့ အားနည်းချက်များ ကို ထောက်ပြ အကြံပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ (လက်သံပြောင်တဲ့ ရွာသားတွေကိုလည်း ကြောက်ပါတယ်။ )
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း စင်္ကာပူ ထီ Toto,4D, လိုမျိုး ၁လ ၂ကြိမ်ဖွင့်သင့်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ချဲထီလို နံပါတ် ရွေးထိုးလို့ ရတာမျိုးပါ။ ၂လုံး ၃လုံး က နိုင်ငံခြားကဖွင့်တဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေလို့ အဆင်မပြေပါ။ ဒိုင်ကိုင်မဲ့သူတွေကို အပေါင်နဲ့ ၁၀၀ ကွက် ၁၀၀၀ ကွက် limit နဲ့ တရားဝင် လိုင်စင်ချပေးပြီ ၁၀% အခွန်ကောက်ပါ။ ဒိုင်မလျှော်ရင်နိုင်ငံတော်က ဒိုင်ဆီက ယူထားတဲ့ အာမခံနဲ့ လျှော်ပါ။
ဒါဆိုရင် ထိုးချင်တဲ့သူလည်း ထိုးလို့ရ၊ ဒိုင်ကိုင်ချင်တဲ့သူလည်း ကိုင်လို့ရ၊ ဒိုင်ပြေးတဲ့ ပြဿာနာလည်း မရှိ။ နိုင်ငံတော်လည်း အခွန်ရ၊ အဆင်ပြေနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။ ရေသောက်မြစ်ကို ရှင်းလင်းနည်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
သူကြီးရဲ့ ” ဒုစရိုက်မှုတွေ” ပို့စ် ကိုဖတ်ပြီး စိတ်ကူးရသွားလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ရွာသားများရော ဘယ်လို မြင်ကြပါသလဲ။ အကြံပေးကြပါဦး။
Nature ရေ၊Title က ၂လုံး၂လုံး ဖြစ်နေတယ်။၂လုံး၃လုံး ပြောချင်တာ မဟုတ်လား။
ဟုတ်တယ် ၊ ပြင်လိုက်ပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (13-14)နှစ်လောက်ကလို့ထင်တာပဲ။ မြန်မာအောင်ဘာလေထီ ဖွင့်ရက်တွေမှာ နောက်ဂဏာန်း(2)နှစ်လုံးကို ကစားကြတာလေ။တလမှာ(၇)ရက်ပေါ့။ အခုလို နေ့တိုင်းမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကို အစိုးရက ပိတ်လိုက်တယ်လေ။ တရက်တည်းနဲ့ မြန်မာထီကို အပြီးဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ လူတွေလည်းကြံရာမရဖြစ်ကြပြီးတော့ အခုလိုနိုင်ငံခြားက ဂဏန်းတွေကို ထွင်ပြီးလောင်းကြတာ။ (3) လုံးကတော့ ဟိုတုန်းကတည်းက အခုလို စလောင်းတွေမရှိသေး တော့ ကက်ဆက်ကနေ ဖမ်းပြီး ချဲဂဏန်းအသံလေးကို နားထောင်ပြီးလောင်းကြတာ။ မြန်မာတွေက အဲဒီနေရာမှာတော့ တော်တယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်ကြကြေးဆိုရင်တော့ တလွဲဆံပင်ကောင်းတွေဖြစ်နေကြတာ။ (23)နှစ်လုံးလုံး ဒီအတိုင်းဘ၀ကို ဒီအတိုင်းဖြတ်သန်းလာကြတာ ဆိုတော့ ပြင်ဖို့တော့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမယ်လို့ထင်တာပဲ။ ခိုးစားရတာပိုအရသာရှိတယ်လို့ လူတွေကထင်ကြတာကိုး……………
သဂျီး ကို ဒိုင်အရင် စမ်းကိုင်ခိုင်းကြည့်ပါ့လား
သူကြီး ဒိုင်ကိုင်ပြီး ရွာသားတွေ ၀ိုင်းထိုးကြမယ်လေ။ကျနော်တို့ က မြန်မာပြည်သားဆိုတော့ မြန်မာငွေပဲ ကိုင်လို့ရတော့ ကျပ်ငွေနဲ့ထိုးမယ်။ သူကြီးကအမေရိကန် မှာနေတာဆိုတော့ လျှော်ရင် ဒေါ်လာနဲ့ လျှော် သဘောတူကြလား?
အောင်မယ်။အခု ငွေဈေးအကျမှာ ဘယ်သူမှဒေါ်လှနားမကပ်ချင်ဘူး။
စနေနေ့က ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို ဟောပြောပွဲမှာ ဆရာက သူ့ကို ဥာဏ်ပူဇော်ခပေးရင် ဒေါ်လာနဲ့တော့ မပေးနဲ့နော် လို့ နောက်သွားတယ်လေ။
( သစ်ပင်တပင်ကို အမြစ်ပြတ် သတ်ချင်ရင် မြင်ရတဲ့ အကိုင်းအခက်တွေကို ပင်စည်တွေကို ခုတ်ပစ်ရုံနဲ့ ဒီသစ်ပင်ဟာ သေသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ လောလောဆယ် အမြင် ရှင်းပြီး သေသလို ဖြစ်နေပေမဲ့ ရေသောက်မြစ်ရှင်သန်နေတဲ့ အတွက် မကြာမှီမှာ ပြန်လည် ရှင်သန်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂လုံး ၃လုံး ရဲ့ရေသောက်မြစ်ကရော ဘာလဲ။ )
ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ ငွေကြေးတွေကို
လာပါ လာပါ လို့ခေါ်ရင်တောင် ရှိတော့မှာ
ဒါနဲ့ပြီးသေးဘူးလေ ကိုပုရဲ့။ ငွေကြေးမပေါ်ခင်က လူတွေ ကုန်ပစ္စည်းဖလှယ် သုံးကြတယ် မဟုတ်လား။ ပိုက်ဆံတွေ ဖျက်လိုက်လည်း ပစ္စည်းအစားထိုးသုံးမှာပေါ့။ တကွက်ကို ကြက်ဥတလုံးပေး ပေါက်ရင် ဆန်တအိတ် ပြန်လျော်မှာပေါ့။ သတ်ရမှာ လူတွေရဲ့ ကိလေသ ဆန္ဒဗျ။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ…..
လောင်းကစားလုပ်တာကတော့ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက မကောင်းတာကို မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောရင် သိပ်ပြီးတော့ နားမ၀င်ကြဘူးလေနော်။ သူတို့ဝါသနာအရပဲ လုပ်နေတာလား ။ အပျင်းပြေ လုပ်ရင်းနဲ့ပဲစွဲသွားတာလား ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြား အကြောင်းတွေကြောင့်ပဲလား ဆိုတာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့ ၂ လုံး ၃ လုံး ထိုးလို့ ချမ်းသာလာတယ်လို့တော့ မကြားဖူးပါဘူး … ဒိုင်တွေပဲ ပိုပြီး ချမ်းသာလာတာပဲ တွေ့ဖူးမြင်ဖူး ကြားဖူးနေသလိုပဲနော် ဒါတွေကို သိနေပေမဲ့လည်း လူတွေက မရပ်နိုင်ကြဘူး …. စကားပုံထဲက လိုမျိုးပဲပေါ့ … ပိုးဖလံမျိုး မီးကိုတိုး …… ။
စင်ကာပူက မြန်မာတွေလည်း Toto , 4D ဖိုးတွေနဲ့ ကုန်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ် … တော်တော်များပါတယ် ။ အိပ်မက်ကို ကောက်ပြီး ထိုးတဲ့သူနဲ့ … တွက်ပြီးထိုးတဲ့သူနဲ့.. အို .. စုံနေတာပါပဲလေ …. ။ ဟိုနေ့ကတောင် လမ်းကြုံ သူများက ထိုးခိုင်းလို့ဆိုပြီး 4D ၀င်ထိုးပေးရင်း နဲ့ ကိုယ်ပါ စမ်းထိုးကြည့်လိုက် မိလို့ အိပ်ထဲက S$ …. လေး က ခုန်ထွက်သွားပါကြောင်း ……
ထီထိုးတယ်ဆိုတာ ထိုးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ချိန်ဆပြီး limit နဲ့ ထိုးဖို့လိုပါတယ်။ လောဘနဲ့ စီးပွားဖြစ်ထိုးလို့ကတော့ ကုန်ဖို့များပါတယ်။ အခုလည်း ကုန်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ သူတို့ကိုမကုန်အောင် ဥပဒေနဲ့ တားလည်း ကုန်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကြိတ်ကုန်နေကြတာပါပဲ။ ချဲသမားတွေကတော့ နံပါတ်ကို တွက်ပြီးထိုးရတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထီစံနစ်ကိုလည်း လေ့လာသင့်ပါတယ်။
ပဒုမ္မာရေ-၁ဒေါ်လာ=၁ကျပ် ဆိုရင် ဆရာ စိတ်မဆိုးလောက်ပါဘူး။
Nature ရဲ့ အကြံက မဆိုးပါဘူး။ လူတိုင်းက ငွေကြေးတိုးပွားဖို့ လုပ်နေကြတာ မဟုတ်လား။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း ကွာကြတာပဲ ရှိတယ်။ တရားဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ရင် အားလုံး (ထိုးသားရော၊ ဒိုင်ရော) အကျိုးရှိကြဖို့ပဲပေ့ါ။
၂လုံး ၃လုံးက ထိုးလို့ပေါက်ရင်လည်း ချမ်းသာပြီမထင်နဲ့။ ဒိုင်ပြေးရင်လည်း ပလုံ ပြန်ရော။ ဒီနည်းက ဒိုင်အာမခံချက်အပြည့်ပဲ။ ကုန်ချင်နေတဲ့ထိုးသားတွေ တရားမ၀င်လိုင်းကြေးပေးပြီး ခိုးကုန် ရာကနေ လိုင်းကြေးမပေးပဲ တရားဝင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ကုန်နိုင်တာပေါ့။ နိုင်ငံတော်လည်း တဖက်တလမ်းက ၀င်ငွေရတာပေါ့။
ပြောရတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ရင်တော့ ကွန်ပြူတာတွေဘာတွေ ၀ယ်တာနဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို သက်သက်သာသာနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ကလည်းဗျာ… တခါလာလည်း လောင်းကစားအကြောင်း၊ နောက်တခါလာလည်း လောင်းကစားအကြောင်း
ကျုပ် လောင်းကစားကို စိတ်လုံးဝမဝင်စားဘူး
လာခဲ့… ဒေါ်လာ တစ်ရာကြေးလောင်းမယ်
အေးလဗျာ၊ ဘယ်လိုလူတွေတုန်း…သူတို့ဝါသနာပါတာနဲ့ ပွဲဆူအောင်လုပ်နေတယ်။ အခုပဲကြည့် ကိုငြိမ်းချမ်းလောင်းတာကို ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဘူး။ မယုံရင် ဒေါ်လာ၂၀၀လောင်းတယ်…
ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေမှာ 4D အပြင် ဘောလုံးပွဲတောင် တရားဝင် အစိုးရအသိသမှတ်ပြု ဒိုင်တွေဖွင့်နေပါပြီ။
၀ါသနာပါရင် ဖုံးနဲ့လှမ်းချိတ်ရုံပါဘဲ။ ဒီမှာတော့တရားဝင်ပေးချင်ပေး မပေးရင် အောင်ဘာလေထီကို
အဆပေါင်းများစွာပေးပြီး ပြိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့လူတွေက တလမှ တခါ ဆိုတာလဲမစောင့်နိုင်ဘူးဗျ။
ဒီလို လုပ်ကြရအောင် ဗျာ ။ သူကြီး က ဖွင့်လိုက်.. ၂လုံးထီ နဲ့ ၃ လုံး ထီ ပေါ့ ။ အထက်က ဖော်ပြ ခဲ့သလို တစ်လ ၂ ကြိမ်ပေါ့ ဗျာ ။ ရွာသူ ရွာသား တွေ က ကော်မရှင်စား လုပ်ပြီး ကစားမယ့်သူ တွေ ကို လိုက်ရောင်းပေါ့ ။ တစ်လ ကို ၂ ကြိမ် မန်းဂေဇက် မှာ ပေါက်ဂဏန်း ကြေငြာ ဗျာ ။ ဒီ field ထဲ က ဝင်သမျှ ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ရဲ့ ၂၀% ကို နိုင်ငံတော် ကို အခွန်ဆောင်မယ် ဗျာ ။ ၂၀ % ကို လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး တို့ ရဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ မှာ လှူ ဗျာ ပေးကမ်းမယ်ဗျာ ။ ကျန် ၆၀ % ကို သူကြီး က ၂၀ % ဗျာ ။ ၄၀ % ကိုတော့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ပေးတဲ့ ရွာသူ ရွာသား တွေ အချိုးကြ ပေါ့ ။ ရဲကြေး လာတောင်း ရင် အခွန်ဆောင်ပြီး အခွန်ကြေ စာရွက် ထုတ်ပြမယ် ဗျာ ။ ကဲ ဘယ်လို သဘော ရသလဲ ။